नमस्ते इभेन्ट्सले आयोजना गरेको बृहत कुन्ती शिला सांकृतिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । पुराना श्रष्ठालाई सम्मान नयाँ प्रतिभाको प्रोत्सान भन्ने उर्देश्यले आयोजना गरीएको कार्यक्रमलाई एन आर एन ए मेरिल्याण्ड च्याप्टरले आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा खुल्ला डान्स च्यम्पेन्सिप्स २०२२ समेत सम्पन्न गरीएको थियो । राहुल के सी,लक्ष्मन पौडेल,रमेश श्रेष्ठको संयोजनमा आयोजित कार्यक्रम एनआरएनए मेरिल्याण्ड च्याप्टरका […]
हेटौंडा \_ पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान प्रधानमन्त्री पदवाट पदमुक्त भएका छन् । संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि खान पदमुक्त भएका हुन् । गएराति भएको मतदानमा खानको विपक्षमा १ सय ७४ मत परेको थियो । झिनो मतले खानले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका हुन् । ३ सय ४२ सांसद रहेको पाकिस्तानको संसदमा बहुमतका लागि १ […]
काठमाडौं \_ आर्थिक संकटमा फसेको श्रीलंकाका २६ जना मन्त्रीहरुले सामुहिक राजीनामा दिएका छन् । खाद्यान्न अभाव र बढ्दो महंगीको बिरोधमा जनताको प्रदर्शनकाबीच २६ जना मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिने मन्त्रीहरुमा प्रधानमन्त्री राजापाक्षेका छोरा समेत रहेका छन् । मन्त्रीहरुको राजीनामाले सरकार थप अप्ठेरोमा परेको छ । यद्दपी राजीनामा दिएका मन्त्रीहरुले जनता र […]
काठमाडौं \_ चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी चैत ११ गते नेपाल भ्रमणमा आउने निश्चित भएको छ । परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको निमन्त्रणामा विदेशमन्त्री वाङ नेपाल आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । नेपाल भ्रमणका क्रममा विदेशमन्त्री वाङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यस्तै परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग […]
काठमाडौं \_ युक्रेनमा जारी युद्धमा परी एक अमेरिकी पत्रकार ब्रेन्ट रिनाउडको मृत्यु भएको छ । युक्रेनको किभ नजिक इरपिन शहरमा रहेका रिनाउडको रुसी सेनाको गोली लागि मृत्यु भएको हो । घटनामा २ जना अन्य पत्रकारहरु पनि घाइते भएको बताईएको छ । ५० बर्षका रिनाउड अमेरिकाका न्युयोर्क टाइम्समा आवद्ध चर्चित पत्रकारका साथै फिल्ममेकर समेत हुन् । […]
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुस र नेटो सेनाबीच सिधै युद्ध भए तेस्रो विश्व युद्ध सुरु हुने निश्चित रहेको बताउनु भएको छ । उहाँले तेस्रो विश्व युद्ध हुन नदिनका लागि पनि आफूहरु संयमित रहेको बताउनु भएको छ । उहाँले उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोका सदस्य देशले युक्रेन र रुसबीच भइरहेको युद्धलाई संयमित भएर रोक्ने प्रयास गर्ने […]
रुसले युक्रेनको बन्दरगाह सहर मारिओपोलमा रहेको एउटा बाल अस्पतालमा हवाई आक्रमण गरेको छ । आक्रमणबाट अस्पतालमा ठूलो क्षति भएको त्यहाँको नगर परिषद्ले जनाएको छ । घटनापछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले ‘बालबालिका भग्नावशेषमुनि रहेका र यो बर्बरतामा विश्वले कहिलेसम्म बेवास्ता गरेर सहयोगी बनिरहन्छ ? भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ । केही घाइतेहरूलाई नजिकैको अर्को अस्पतालमा सारिएको छ […]
काठमाडौं \_ पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको छ । विपक्षी दलहरुको गठबन्धन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट (पीडीएम)ले प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेको हो । लाहोरमा केही हप्ता अगाडि बसेको मुभमेन्टको बैठकमा यसका प्रमुख फजजुर रहमानले वर्तमान सरकारलाई अवैध भन्दै अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि सबै सहयोगी दलहरुसँग सम्पर्क […]
रुस र युक्रेनबीच शान्ति वार्ता सुरु भएको छ । रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको पाँचौँ दिन दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलले युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले वार्ता सुरु गरेका हुन् । युक्रेनसँगको सीमा क्षेत्रमा पर्ने बेलारुसको एक क्षेत्रमा भइरहेको दुईपक्षीय वार्ताकाे सुरुमै युक्रेनले युद्धविराम गरेर वार्ता अघि बढाउन आग्रह गरेको बीबीसीले जनाएको छ । यसअघि वार्ता टोली […]
युक्रेनमा रहेका १९३ जना नेपाली सम्पर्कमा, स्लोभाकिया, पोल्याण्ड वा हंगेरीतर्फ जान दूतावासको आग्रह
काठमाडौं \_ बर्लिनमा रहेको नेपाली दूतावासले युक्रेनमा रहेका नेपालीहरुलाई स्लोभाकिया, पोल्याण्ड वा हंगेरीतर्फ जान आग्रह गरेको छ । ती मुलुकहरुले युक्रेनमा फसेका विदेशी नागरिकहरुका लागि मानवीयताको आधारमा बोर्डर खुल्ला गरेको जानकारी दिंदै दूतावासले त्यतै जान अनुरोध गरेको हो । सुरक्षित तवरले नेपाल फर्कनका लागि सम्पर्कका आएका सबै नेपालीहरुलाई युक्रेन छाडेर ती मुलुकहरुतर्फ जान दूतावासले अनुरोध […]
रुसको आक्रमणपछि युक्रेनमा त्रास, इमर्जेन्सी साइरन बजाउँदै भागाभाग
रुसको आक्रमणपछि युक्रेनको राजधानी किभ छाड्नेको सङ्ख्या बढेको छ । राजधानीबाट सयौँ मानिहरु निस्कन थालेका बीबीसीले जनाएको छ । निजी गाडीमा उनीहरु इमर्जेन्सी साइरन बजाउँदै बाहिरिन थालेका खबरमा उल्लेख गरिएको छ । रुसले आक्रमण थालेसँगै डराएका उनीहरु भाग्न थालेका त्यहाँका एक पत्रकारले बताएका छन् । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सैन्य कारबाहीको घोषणा गरेसँगै युक्रेनको राजधानीलगायत ठाउँठाउँमा […]
बेलायतमा कोरोनाबाट एक लाख ६० हजार बढीको मृत्यु
बेलायतमा महामारी सुरु भएयता कोरोनाका संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या एक लाख ६० हजार नाघेको छ । ‘डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एण्ड सोसल केयर’ ले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याँक अनुसार हालसम्म एक लाख ६० हजार ३८ जनाको ज्यान गइसकेको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा थप १९९ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । तर, राष्ट्रिय तथ्यांकको […]
अमेरिकाले युरोपमा थप २ हजार सैनिक खटाउने
काठमाडौं \_ युक्रेनमा रुसले आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै अमेरिकाले यसै हप्ता युरोपमा अतिरिक्त सेना पठाउने निर्णय गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले करीब दुई हजार सैनिक युरोपको सीमा क्षेत्रमा पठाउने निर्णय गरेका ह्वाइट हाउसका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । यी सैनिकहरु फोर्ट ब्राग, नर्थ क्यारोलिनाबाट पोल्याण्ड र जर्मनी पठाइने छ । यसैगरी […]
‘बिग बोस १५’ को उपाधि तेजस्वी प्रकाशलाई
मुम्बई \_ लोकप्रिय रियालिटी शो ‘बिग बोस १५’को विजेता तेजस्वी प्रकाश बन्नुभएको छ । विजेता बनेसँगै तेजस्वीले ट्रफीका साथ ४० लाख रुपैयाँ पुरस्कार पनि जित्नुभयो । शोमा प्रतीक सहजपाल फष्ट रनरअप र करण कुन्द्रा सेकेण्ड रनरअप बन्नुभयो । आइतबार राति भएको फिनालेमा निशान्त भट्ट, तेजस्वी प्रकाश, करण कुन्द्रा, प्रतीक सहजपाल र शमिता शेट्टीबीच ट्रफीका लागि […]
रुस र युक्रेनबीच युद्धको खतरा लगातार बढ्दै गइरहेको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकी रक्षा विभाग पेन्टागनले ८ हजार ५ सय अमेरिकी सैनिकलाई पूर्वी युरोपमा तैनाथ गर्नका लागि हाईअलर्ट राखेको छ । पेन्टागनका प्रवक्ता जोन किर्बीले यसमा कम्ब्याट टोली, स्वास्थ्यकर्मी, गुप्तचर र सर्भेलेन्ट टिमका सदस्य सामेल रहेको जानकारी दिएका छन् । किर्बीले भने, अहिलेसम्म यी […]
बेलायतमा नयाँ प्रतिबन्धहरु हट्दै, जनजीवन पुरानै लयमा फर्किँदै
बेलायतले कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट फैलिएसँगै लगाइएको नयाँ प्रतिबन्धहरु फुकुवा गर्न थालेको छ । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले सङ्क्रमण फैलिएपछि रोकथामका लागि भन्दै लागू गरिएको ‘प्लान बी’ अन्तर्गतका नियम तथा प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा गरेसँगै त्यहाँको जनजीवन पुरानै अवस्थामा फर्किन लागेको छ । बेलायतमा अब मास्कलाई अनिवार्य गरिने छैन भने सेल्फ आइसोलेशनको कडा नियमलाई पनि निरन्तरता दिइने […]
अफगानिस्तानमा गएको भूकम्पमा २६ जनाको ज्यान गएको छ ।भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेमा पाँच जना महिला र चार जना बालबालिका समेत रहेका न्यूज एजेन्सी एफपीमा उल्लेख छ। तुर्केमिनिस्तानसँगको सीमा क्षेत्रमा पर्ने पश्चिमी प्रान्त बडघिसमा हिजो ५ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको न्यूज एजेन्सी एफपीले जनाएको छ । भूकम्पका कारण कयौँ घर भत्किएका छन् । ज्यान गुमाउनेमा […]
लन्डन \_ नेपालीहरूको ठूलो जनघनत्व रहेको बेलायतका नेपालीहरू स्थानीय राजनीतिमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहँदै आएका छन् । हालसम्म बरो काउन्सिलसम्म नेपालीहरूको पहुँच भए पनि नेपालीमूलका एकजना स्थानीय नेता डा. जगन्नाथ शर्मा काउन्टी काउन्सिलमा काउन्सिलर उम्मेदवार छनोट भएका छन् । इंग्ल्याण्डकै ठूलो काउन्टी रूपमा मानिने नर्थ योर्कसायर काउन्टी काउन्सिलमा ९५ प्रतिशत कन्जरभेटिभ सदस्यहरूले मत प्राप्त गर्दै उनी […]
काठमाडौं \_ बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकाशेन्कलाई बिश्वकै भ्रष्ट ब्यक्ति ठहर गरिएको छ । अर्गनाइज्ड क्राइम एण्ड रिपोर्टिङ्ग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) ले बेलारूसका राष्ट्रपति लुकाशेन्कोलाई वर्ष २०२१ को सबैभन्दा भ्रष्ट व्यक्ति ठहर गरेको हो । ओसीसीआरपीले तयार पारेको सुचीमा बेलारुसका राष्ट्रपति लुकाशेको सहित अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति अशरफ घानी, सीरियाका राष्ट्रपति बशर अल असद, टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप अर्दोआन […]
बेलायतमा कोरोना संक्रमण दर उच्च बिन्दुमा पुगे पनि सरकारले तत्कालै प्रतिबन्ध लागू नगर्ने जनाएको छ । क्रिसमसपछि संक्रमण दर नियन्त्रण गर्न कडा प्रतिबन्ध लगाइने भनिएपनि नयाँ वर्ष अगाडी कुनै प्रतिबन्ध नलगाइने बेलायती स्वास्थ्यमन्त्री साजिद जाविदले आज बताएका हुन । तर, बेलायतकाअन्य क्षेत्रमा भने प्रतिबन्ध लागू गरिसकिएको छ । क्रिसमस अवधिभरमा यहाँ थप तीन लाख बीस […]
123 … 16 Newer >>